Xasan Sheekh oo faahfaahiyay kulankii Guddoonka Baarlamaanka iyo Madasha Xisbiyada - Jowhar Somali Leader
Home News Xasan Sheekh oo faahfaahiyay kulankii Guddoonka Baarlamaanka iyo Madasha Xisbiyada
Xasan Sheekh oo faahfaahiyay kulankii Guddoonka Baarlamaanka iyo Madasha Xisbiyada
Guddoomiyaha Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD ahna Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan ay 28kii bishan ku yeesheen magaalada Muqdisho Guddoonka Golaha shacabka iyo Hogaanka Madasha Xisbiyada Qaran.
Kulankan oo siyaabo kala duwan loo fasirtey dhacayna maalmo kadib markii uu guddoomiyaha baarlamaanka ka horsheegay kulankii baarlamaanka in la ridey xukuumadii Xasan Cali Kheyre ayuu Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inuu ahaa mid aysan guddoonka wax farriin ah u keeninin iyagana u dhiibin.
“Waxaan rabaa inaan faah faahiyo kulankii dhawaan ay madashu la yeelatay guddoonka Golaha shacabka kaas oo dad badan ay ii soo weydiyeen siyaabo kala duwan walaalayaal waxaan rabaa idin xaqiijiyo in aysan jirin wax fariin ah oo uu noo siday Guddoonka annaguna aanan u dhiibin wax fariin ah”ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh ayaa ku tilmaamay kulankaas inuu ahaa mid la mid ah kulamo ay hore u yeelan jireen madaxda Madasha Xisbiyada Qaran iyo Guddoonka Baarlamaanka.
“Guddoonka Golaha Shacabku Madaxda Qaranka ayey ka mid yihiin madaxduna wey kulmi karaan weyna wadatashan karaan balse ma jrin wax gaar ah oo annaga iyo Guddoonku aan u kulannay sababtoo ah horay ayaan sidaan oo kale u kulmi jirnay” ayuu yiri” Xassan Shiekh Maxamuud.
Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa warbaahinta u sheegay maanta in aysan waxba iska bedelin mowqifkoodii doorashooyinka oo ah in la qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda.
Sawirro: Xafiiska Hubinta Tayada Qalabka Dhismaha oo xarigga laga jaray
Al-Shabaab oo sheegtay in weerar hubeysan ka fulisay Xaafad ka tirsan Muqdisho